LUK 16 - Baịbụl Nsọ [Igbo Bible 1988] - (LUK 16)
Mgbe ahụ Jisọs gwara ndị na-eso ụzọ ya sị, “Otu ọgaranya nwere otu odibo na-ejere ya ozi. Emesịa, ndị mmadụ bidoro ịkọsara ọgaranya ahụ na nwa odibo ya na-emebisi ego ya.
“Otu ụbọchị, nwoke a kpọrọ odibo ya sị, ‘Gịnị bụ akụkọ ndị a m na-anụ banyere gị? Achọrọ m ka ị bịa guziere m otu i si na-elekọta ego m nꞌihi na achọkwaghị m ka ị bụrụ odibo m ọzọ.’
Ahaaa! Amatala m ihe m ga-eme, nke ga-enyere m aka mgbe nna m ukwu chụpụrụ m. Mgbe ahụ aga m enweta ndị ga-anabata m nꞌụlọ ha.’
“Odibo ahụ ziri ozi kpọọ ndị nile ji nna ya ukwu ụgwọ ka ha bịakwute ya. Mgbe onye nke mbụ bịara, ọ jụrụ ya sị, ‘Gịnị bụ ụgwọ i ji nna m ukwu?’
Nwoke ahụ zara ya sị, ‘Ọ bụ puku karama mmanụ ka m ji ụgwọ ya.’ Odibo ahụ gwara ya sị, ‘Ngwa, were akwụkwọ ebe i dere na ọ bụ puku karama mmanụ ka i ji ụgwọ ya. Nọdụ ala degharịa ya, dee na ọ bụ narị karama ise.’ Mgbe nwoke ahụ desịrị pụọ,
“Odibo ahụ kpọrọ onye nke abụọ jụọ ya sị, ‘Gịnị bụ ụgwọ i ji?’ Nwoke ahụ zara ya sị, ‘Ọ bụ narị akpa ọka.’ Odibo ahụ zara sị ya, ‘Ngwa, lee akwụkwọ ebe i dere na ọ bụ narị akpa ọka ka i ji ụgwọ ya, degharịa ya, dee na ihe i ji ụgwọ ya bụ iri akpa ọka asatọ.’
“Mgbe nna ya ukwu nụrụ ihe odibo ya mere, o toro ya nꞌihi na ihe o mere jupụtara nꞌamamihe. Ọ bụkwa eziokwu na ndị ụwa nwere amamihe idozi ihe ọ bụla nꞌụzọ o ga-esi baara ha uru, karịa ndị ahụ bụ ụmụ nke ìhè.
Ya mere ka m gwa unu, jirinụ akụ na ụba unu mepụtara onwe unu enyi, nke ọ ga-abụ na mgbe ọ na-adịkwaghị akụ unu nwere, a ga-anabata unu nꞌụlọ ebighị ebi ahụ.
“Otu onye apụghị ịbụ odibo mmadụ abụọ. Ọ ghaghị ịkpọ otu asị hụ nke ọzọ nꞌanya, ma ọ bụkwanụ ọ ga-eme nanị ihe otu nꞌime ha chọrọ leda onye nke ọzọ anya. Nꞌụzọ dị otu a kwa mmadụ enweghị ike ịhụ Chineke na ego nꞌanya otu mgbe ahụ.”
Ndị Farisii hụrụ ego nꞌanya, ndị nụrụ ihe ndị a Jisọs kwuru, weere Jisọs mee ihe ọchị.
Tupuu Jọn abịa, ndị mmadụ na-agụ ihe Mosisi na ndị amụma dere. Ma kemgbe Jọn bịasịrị, a na-ekwusa ozi ọma alaeze Chineke, mmadụ nile na-ejikwa ike na-abanye nꞌime alaeze a.
Ma nke a egosighị na ihe Mosisi dere abakwaghị uru. Nꞌezie, ọ dị mfe eluigwe na ụwa ịhapụ ịdịkwa karịa na akwụkwọ iwu ahụ ga-abụ ihe na-abaghị uru.
“Ọ dị otu ọgaranya na-eyi uwe mara mma, na-erikwa nri dị mma ụbọchị nile.
Nꞌọnụ ụzọ e si abanye nꞌụlọ onye ọgaranya a, otu nwoke ahụ ya jupụtara nꞌọnya na-edina nꞌebe ahụ oge nile! Aha nwoke a bụ Lazarọs.
Ọ gụsịrị Lazarọs agụụ ike iri ọ bụladị ibiribe nri si na tebulu onye ọgaranya ahụ daa nꞌala, ma o nweghị onye nyere ya. Nꞌezie, ọ bụladị ụmụ nkịta na-abịa na-aracha ọnya dị ya nꞌahụ
Nꞌọkụ ala mmụọ ebe onye ọgaranya ahụ nọ nꞌoke mgbu, ọ hụrụ Eberaham ka ọ nọ nꞌebe dị anya. Ọ hụkwara Lazarọs ka ọ nọ nꞌakụkụ Eberaham.
“Onye ọgaranya ahụ kpọkuru Eberaham sị ya, ‘Nna m Eberaham, meere m ebere nꞌihi na anọ m nꞌoke mgbu nꞌebe a, biko zienụ Lazarọs ka o denye mkpịsị aka ntakịrị ya na mmiri bịa metụ ya nꞌire m ka akpịrị na-akpọ m nkụ dajụọ.’
A sịkwarị na anyị achọọ inyere gị aka, ọ gaghị ekwe mee nꞌihi na e nwere olulu dị ukwuu kewara anyị na unu. Mmadụ ọ bụla enwekwaghị ike isite nꞌebe a bịa nꞌebe unu nọ, ọ dịkwaghị onye nwere ike isite nꞌebe unu nọ bịa nꞌebe a.’
“Onye ọgaranya ahụ gwara Eberaham sị ya, ‘Biko, arịọ m gị, nna m, zienụ ozi zigara ndị bi nꞌụlọ nna m nꞌụwa.
Nꞌihi na enwere m ụmụnne ise. Ka ndị ị ga-eziga gaa dọọ ha aka na ntị ka ha bie ụdị ndụ nke na-agaghị eme ka ha bịa nꞌebe ahụ ụfụ a m nọ.’
“Ma Eberaham zara ya sị, ‘Ụmụnne gị nwere akwụkwọ nsọ ebe Mosisi na ndị amụma ziri ụzọ e si eme ihe ga-atọ Chineke ụtọ. Ha gụọ ya, ma meekwa ihe ha gụtara ọ chọrọ ka ha mee.’
Ma onye ọgaranya ahụ zara sị, ‘Nna m Eberaham, nke ahụ agaghị ezu! Ọ dị mkpa na mmadụ ga-esite na ndị nwụrụ anwụ bilie gaa gwa ha ka ha chegharịa.’
“Ma Eberaham zara ya sị, ‘Ọ bụrụ na ha agaghị eme ihe ha ga-agụta nꞌakwụkwọ Mosisi na ndị amụma dere, echeghị m na ha ga-echegharị ma mmadụ site nꞌọnwụ bilie bịa gwa ha okwu.’ ”